Pregnancy – စာမကျြနှာ 10 – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာစိုးလွင် သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဖြေကြားသည်။ ♦ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် ကာကွယ်ဆေး♦ Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ ဘယ်လို ကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးလို့ရပါသလဲ။ ဘယ်လို ကာကွယ်ဆေးတွေ မထိုးသင့်ဘူးလဲ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ A. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးကို နှစ်ကြိမ်ထိုးပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ထိုးရသလဲဆိုရင်...
မေး။ ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လှေကားအတက် အဆင်းများများလုပ်လို့ရပါသလား။ ကျွန်မကခြောက် လွှာမှာနေပြီး ဈေးဝယ်လိုက်၊ အပြင်သွားလိုက်နဲ့ အမြဲလှုပ်ရှားနေရလို့ပါ။ သင်းသင်းနု၊ အလုံ။ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမိယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ ဆရာတို့လည်း နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ ဒီလို...
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မိခင်စိတ်အပြည့်ဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် လူနာတစ်ယောက်ကို ကြည့်ပြီးတိုင်း ဘာတွေဆောင်ရမယ်၊ ဘာတွေရှောင်ရမယ် စသဖြင့် ဆရာတို့က ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဆေးရုံတွေမှာ မိခင်တွေက အများကြီး၊ ဆရာဝန်က တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်တော့ အကုန်လုံးကို စုံလင်အောင် ပြောဖို့...
မေး။ ။ သွေးတိုးရောဂါရှိပါတယ်။ ကလေးယူလို့ရပါသလား။ ကလေးယူမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုတွေ လိုက်နာသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ လဲ့လဲ့၊ တာမွေ။ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ သွေးတိုးရောဂါရှိတယ်ဆိုရင် သမားတော်နဲ့ သေချာတိုင်ပင်ပြီး သွေးတိုးကိုဆေးကုရပါမယ်။ သွေးတိုးကို ထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုရင်...
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အမျိုးသမီးတွေ အလုပ်လုပ်တာ၊ ခရီးသွားတာတွေကြောင့် ကလေးမရှိတဲ့ဘ၀ကို အကြာကြီးဖြတ်သန်းတဲ့နှုန်းက မြင့်မားလာပြီး ၃၀ကျော်အရွယ်တွေမှာ ပထမအကြိမ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှုန်းဟာ ၁၉၉၁ ခုနှစ်ကတည်းကထက် နှစ်ဆဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီအပတ်မှာ အသက် ၆၂ နှစ်အရွယ် သြစတြေးလျအမျိုးသမီး တစ်ယောက်က ဖန်ပြွန်သန္ဓေသားနည်းနဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကွမ်းစားရင် မွေးလာတဲ့ကလေးလေးဟာ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကွမ်းစားတာက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အရက်သောက်သလိုမျိုး ရရှိတဲ့ ဆိုးကျိုးက အတူတူပါပဲ။ မွေးလာမယ့် ကလေးအပေါ်ရရှိမယ့် ထိခိုက်မှုကလည်း အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကွမ်းစားရင်...
ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် ငှက်ပျောသီးကို ရွှေမှုန်ကပ်ပြီး စားသင့်သလား
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မေး။ ။ ကလေးဥာဏ်ကောင်းမယ့်နည်းလို့ အမေက ပြောပါတယ်ရှင့်။ ငှက်ပျောသီးကို ရွှေမှုန်ကပ်ပြီး စားခိုင်းတာပါ။ ကိုယ်ဝန်လေးလမှာ စားရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တုန်း အဲဒီလို စားရင် ကလေးကို ဥာဏ်ကောင်းစေပါတယ်တဲ့။ ကျွန်မ အနေနဲ့...
ဒေါက်တာစိုးလွင်(သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အာဟာရပြည့်အောင် စားသင့်ပါတယ်။ အစားအသောက်ကို စုံလင်မျှတအောင် စားသင့်ပါတယ်။ တချို့အမေတွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့သမီးကို ‘အသားတွေ မစားနဲ့၊ ကလေးထွားမယ်၊ ပဲမစားနဲ့၊ ကလေး လေပါမယ်’ စသဖြင့် ပြောတတ်တယ်။ တစ်ခါတလေ ဘာစားရမှန်းကို မသိရလောက်အောင်ပါပဲ ....
အပူအပင်ကင်းတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလကို ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ရာ . . .
၊ လရိပ်မေ ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ဟာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဘ၀မှာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကောင်းဆုံး အချိန်တစ်ချိန်ဖြစ်သလို ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ရော ဗိုက်ထဲက သန္ဓေသားလေးပါ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေဖို့ အထူးစောင့်ရှောက်ရမယ့် အချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ – အနားယူချိန်ပေးပါ အထူးသဖြင့် သားဦးကိုယ်ဝန် မဟုတ်ဘဲ ဒုတိယကိုယ်ဝန်ဆိုရင်ပိုပြီး...